ကုန်စည်ဒိုင်သတင်းများ | Commerce
Home » ကုန်စည်ဒိုင်များ
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ လားရှိုးလက္ကားကုန်စည်ဒိုင်စတင်တည်ထောင်ခြင်း ၄ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့နဲ့ တစ်နေ့တန် ၃၀ ကျ ပဲပုပ်၊ ပြောင်း၊ ဝဥ၊ စပါးနှင့် သီးနှံအခြောက်ခံစက်သစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်က လားရှိုးမြို့က ယာဉ်ငယ် ဝင်းရှိ စက်တည်ဆောက်ထားတဲ့နေရာမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၎င်းင်းအခမ်းအနားသို့ လားရှိုးခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်မြိုင်၊ တွဲဘက်ပြည်နယ်နှင့် ခရိုင်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဌနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်များ၊ လားရှိုးလက္ကား ကုန်စည်ဒိုင်ဥက္ကဌနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်များ၊ လားရှိုးမြို့ပေါ်ရှိ ကုန်သည်အသင်းအဖွဲ့များမှ အလုပ်အမှုဆောင်များ၊ ကုန်သည် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ စက်တည်ဆောက်ရေးပညာရှင်အဖွဲ့များနှင့်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတောင်သူများ စုစုပေါင်း လူ ၁၀၀ ဦးကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
လားရှိုးလက္ကားကုန်စည်ဒိုင်မှတစ်ဆင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ လားရှိုးခရိုင်နဲ့ ကျောက်မဲခရိုင်တို့မှ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့ အစေ့ ထုတ်ပြောင်းများကို တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ အဓိကတင်ပို့ရောင်းချခဲ့ရာမှာ နှစ်စဉ်ပြောင်းတန်ချိန် ၂ သိန်းကျော် တင်ပို့ရောင်း ချပြီး ပြည်ပဝင်ငွေပိုမိုတိုးတက်ရရှိနေတာကို တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လားရှိုးလက္ကားကုန်စည်ဒိုင်အနေနဲ့လည်း သီးနှံစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်တဲ့ လားရှိုးမြို့နယ် ကျေးရွာတော်တော်များများက တောင်သူများကိုလည်း ပြောင်းနဲ့ပဲပုပ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့ စိုက်ပျိုးရာသီမတိုင်မီမှာ တောင်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့ မျိုး၊ သွင်းအားစုနဲ့ စိုက်ပျိုးစရိတ်များကိုလည်း ကြိုတင် ထုတ်ပေး ထောက်ပံံ့ပေးခဲ့တာဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုများပြားစွာ ဆောင်ရွက်လာနိုင်ခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်က တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့ လယ်ယာထွက်ကုန်သီးနှံများအနက် အဓိကဖြစ်တဲ့ အစေ့ထုတ်ပြောင်းသီးနှံဟာ အစိုဓါတ်များပြားခြင်းကြောင့် အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်း၊ မှိုစွဲကပ်ခြင်း၊ အရောင်အဆင်းညံ့ဖျင်းခြင်းစတာတွေကြောင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံဈေးကွက်ကို ရောင်းချတဲ့အခါမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဈေး၊ရသင့်တဲ့ဈေးမရရှိဘဲ ဈေးအနှိမ်ခံရခြင်းများရှိခဲ့ပါတယ်။
MARKET PRICE (17-1-2012)
Sr.No Description of Goods A/U 10 - 1 - 2012 17 - 1 - 2012
1. Emata Pyi 600 550 450 600 600 450
Bag 14000 13000 10800 14000 14000 10800
2. Ngasein Pyi 600 650 - 600 650 -
Bag 14000 15000 - 14000 15000 -
3. Ngakyew Pyi 1100 1100 - 1150 1100 -
Bag 26400 26400 - 27600 26400 -
4. Pawsan Pyi 1250 1250 1250 1250 1250 1300
Bag 30000 30000 30000 30000 30000 31200
3800 3500 3200 3800 3500 3200
2. Sesamum Oil Viss 3400 3200 3000 3400 3200 3100
3. Palm Oil Viss 1800 1950 1900 1800 1950 1850
Goods A/U 10 - 1 - 2012 17 - 1 - 2012
1. Matpe basket 15100 14500 13400 - 15400 13700 13900 14000
2. Toor Whole basket 16400 18700 16300 17800 16500 16400 16700 17800
3. Green Mung Bean basket 15300 15600 15800 15500 16100 15900 15200 15900
4. Whole Chick Pea basket 20200 18700 - 18500 20200 16700 - 17100
Myintkyina 4000 1200 2000 1000
Lashow 3000 1000 1800 800
Taungyi 4500 1000 2000 500
Hpa-An 3000 700 3000 1000
Mawlamying 3500 650 2100 800
Myeik 4500 1200 2800 1000
Yangon 4000 600 2500 900
Sittwe 3500 700 2200 700
Monywa 3000 400 2600 800
Pakukku 2700 450 2600 650
Magway 3500 500 2000 700
Pyay 3800 600 2200 900
Bago 3900 600 2200 700
Naypyidaw 3500 700 2600 1200
Kalay - 700 1500 800
Fish Trading Center Border
1. Mirgal Viss/Kilo 2100 3300 2300 3300
2. Rohu Viss/Kilo 1200 1700 1200 1700
3. Cutla Viss/Kilo 1200 1800 - - 1200 1800 - -
4. Feather Back Viss/Kilo 2000 3500 2500 3500
5. Hilsa Viss/Kilo 2800 24000 2800 24000
6. Snake Head Viss/Kilo 2500 3500 2500 3500
7. Eel Viss/Kilo 1800 3000 2000 2800
8. Giant Sea Perch Viss/Kilo 2000 4000 2000 4500
11. Shrimp Viss/Kilo 1800 2500 1800 2500
12. Shrimp(big size) Viss/Kilo 2000 3500 2000 3500
13. Prawn Viss/Kilo 12000 26000 12000 26000
City 10 - 1 - 2012 17 - 1 - 2012
Taungyi 707000 716000
Myitkyina 704000 707000
Myeik 702000 712000
Mawlamying 695000 710000
Sittwe 707600 712500
Yangon 690000 690000
Mandalay 707500 718000
Pyay 709000 716500
Naypyidaw 710000 720000
Sr.No Kinds of Rubber 10 - 1 - 2012 17 - 1 - 2012
1. RSS-1 2600720 3200-3300 2600720 3250-3350
2. RSS-2 2512560 3150-3250 2512560 3200-3300
3. RSS-3 2424400 3100-3200 2424400 3150-3250
4. RSS-4 2314200 3050-3150 2314200 3100-3200
5. RSS-5 2204000 3000-3100 2204000 3050-3150
Sr.No Kinds of Steel 10 - 1 - 2012 17 - 1 - 2012
Sr.No Description of Goods A/U 18 - 10 - 2011 25 - 10 - 2011
1. Emata Pyi 800 800 600 800 800 600
Bag 19000 19000 14000 19000 19000 14000
2. Ngasein Pyi 620 650 - 625 650 -
Bag 14500 15000 - 14500 15000 -
3. Ngakyew Pyi 1250 1250 - 1250 1200 -
Bag 30000 30000 - 30000 28000 -
4. Pawsan Pyi 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Bag 32000 32000 32000 32000 32000 32000
3900 3600 3200 3900 3600 3200
2. Sesamum Oil Viss 3700 3500 3100 3800 3500 3200
3. Palm Oil Viss 1800 1900 1800 1800 1900 1900
Goods A/U 18 - 10 - 2011 25 - 10 - 2011
1. Matpe basket 18700 16700 18600 16000 19200 16800 18000 16700
2. Toor Whole basket 14300 13000 - 13000 14300 13200 - 13400
3. Green Mung Bean basket - 17000 - 17800 18700 15800 16000 15300
4. Whole Chick Pea basket 27000 22000 - 23000 25000 23200 - 228000
Myintkyina 4000 1300 2000 1000
Lashow 3000 1500 1200 800
Kengtong 4000 1500 2000 700
Taungyi 3500 1500 1700 500
Loikaw 3000 1300 1500 700
Hpa-An 3000 1500 2000 800
Mawlamying 3500 1500 2000 700
Myeik 3000 1800 2700 1000
Yangon 4000 1500 2500 600
Pathein 3000 1450 2500 700
Sittwe 4000 1300 2000 700
Monywa 3000 1200 3400 800
Mandalay 4000 1400 2000 600
Pakukku 3200 1200 2000 700
Magway 3000 1200 2400 700
Pyay 2800 1400 1800 750
Bago 4300 1300 1900 750
Naypyidaw 3000 1400 2400 600
Kalay - 1000 2000 800
1. Mirgal Viss/Kilo 2000 3200 2000 3000
2. Rohu Viss/Kilo 1300 1600 1300 1600
3. Cutla Viss/Kilo 1300 2200 - - 1300 2000 - -
4. Feather Back Viss/Kilo 2000 3200 2000 3200
5. Hilsa Viss/Kilo 2500 26000 2800 26000
6. Snake Head Viss/Kilo 2500 4500 2000 4200
7. Eel Viss/Kilo 2000 3500 2000 3500
8. Giant Sea Perch Viss/Kilo 2000 4000 2800 4000
11. Shrimp Viss/Kilo 1800 2000 1800 2800
12. Shrimp(big size) Viss/Kilo 2800 3500 2800 3800
13. Prawn Viss/Kilo 10000 27000 14000 26000
City 18 - 10 - 2011 25 - 10 - 2011
Taungyi 702000 702000
Myitkyina 718000 718000
Myeik 720000 720000
Mawlamying 716000 716000
Sittwe 730000 730000
Yangon 711000 711000
Mandalay 707500 707500
Pyay 720000 720000
Naypyidaw 718000 718000
Sr.No Kinds of Rubber 18 - 10 - 2011 25 - 10 - 2011
1. RSS-1 3195800 4100-4200 3085600 4100-4200
2. RSS-2 3140700 4050-4150 2975400 4050-4150
3. RSS-3 3085600 4000-4100 2865200 4000-4100
4. RSS-4 2920300 3950-4050 2721940 3950-4050
5. RSS-5 2755000 3900-4000 2578680 3900-4000
Sr.No Kinds of Steel 18 - 10 - 2011 25 - 10 - 2011
(b) Flat Bar (6 x 50.9 x 100) 700000 700000
(c) H-beam (5.5'8 x 200 x 100) 710000 710000
(b) Cold R-sheet 1.0mm 1000000 1000000
(c) Medium Plate (3.2 x3x 6) 700000 700000